Otu anyị si abịaru nso gụnyere - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Gbasara anyị > Kedu ka anyị si abịaru nnabata
Na BLG Mind anyị na-eji nsonye akpọrọ ihe. Anyị ghọtara na nke a bụ usoro na-agbanwe agbanwe nke chọrọ nyocha na-aga n'ihu na-abịaru anyị nso, omume na ọdịbendị izugbe.
Ya mere, gịnị ka anyị na-eme banyere ya?
Maka nke a, n'April 2019, e hiwere Otu Ndị Nchịkọta Ntinye (IRG), gụnyere ndị ọrụ ọrụ, ndị ọrụ, ndị ọrụ afọ ofufo, ndị nlekọta na ndị ọkachamara na mpụga. Ebumnuche nke otu a bụ iji nyere aka mepụta nzukọ na-esonye na nghọta ka ukwuu nke ndị niile anyị na-akwado ma na-emekọ ihe, na-ebute mgbanwe dị mma na ọdịnala na omume.
Mgbe ọnwa 18 nke ọrụ zuru ezu gasịrị, otu a mepụtara BLG Mind Inclusion Review Report (bipụtara Ọktoba 2020). Ihe omuma a emeela ka ndi mmadu kwadoro ka anyi mezuo n'oge di mkpirikpi, nke ozo na ogologo oge.
Nkwado ndị a na-elekwasị anya n'ọtụtụ mpaghara n'ime nzukọ ahụ, gụnyere ụzọ anyị si etinye aka na mbanye, ojiji anyị n'asụsụ na onyonyo yana itinye uche na otu ọrụ anyị si dị mkpa na ịnweta.
Anyị ga na -arụ ọrụ mgbe niile maka ọtụtụ ndụmọdụ n'otu oge mana nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ anyị enwetagoro.
Ndụmọdụ na omume Eprel 2022
Weghachite ndị mmeri nsonye sitere na ọgbakọ niile.
15 Ndị mmeri gụnyere ma na-enweta ọzụzụ maka ọrụ ahụ.
Chọọ ohere iji wulite ọrụ ezubere iche maka obodo ndị achụpụrụ na ndị na-enweghị ọrụ.
Enwetara ego iji wulite mmemme Nne anyị dị njikere maka ndị dị ime na ndị nne ọhụrụ iji gboo mkpa nke obodo dị iche iche na Lewisham, gụnyere site na ọrụ ime enyi ọhụrụ.
Chọpụta otu esi agba ndị otu ndu ume ka ha nwee mmasị, jụọ ajụjụ ma ghara iche echiche.
Ndị niile BLG Mind Trustees na ndị isi njikwa nwetara ọzụzụ amaghị ama ama na mgbochi ịkpa ókè agbụrụ. Nsonye bụ nlebara anya nke Mmemme Mmepe Nduzi nke a na-enyefe ndị isi iri abụọ n'ofe BLG Mind site na Eprel-July 20.
Ntụnye na omume Septemba 2021
Nye ndị ọrụ ọrụ ọzụzụ ọzụzụ iji meziwanye mmata na omume gburugburu nsonye.
Ọzụzụ amaghị ihe ọ bụla na ọzụzụ mgbochi ịkpa ókè agbụrụ bụzi ọzụzụ dị mkpa maka ndị ọrụ niile. A na -ahazi nnọkọ maka afọ na -abịanụ, na -enye ohere ọzụzụ nke ndị ọrụ na ndị ọrụ afọ ofufo 150 na nke ọ bụla.
Nweta nghọta ka mma maka otu na obodo ndị anyị nwere ike ọ gaghị enye site na ọrụ anyị, na -achọpụta ebe oghere dị na ndị anyị na -agaghị erute. Chọọ ohere iji zụlite ọrụ ezubere iche maka obodo ndị mepere emepe na ndị anaghị eje ozi.
A họpụtara onye njikwa ọrụ ka ọ na -ebute nnyefe nke nnukwu ọrụ mmekorita ọhụụ lekwasịrị anya na Nkwado ndị ọgbọ & njikọ aka obodo maka obodo dị iche iche dị na Lewisham.
Na -anọchite anya ọdịiche dị na njiri mara, na akwụkwọ akụkọ BLG Mind yana site na webụsaịtị anyị na ọwa mgbasa ozi mmekọrịta.
Chakwasa ihie na -egosipụta ọtụtụ ndị ọrụ na ndị ọrụ afọ ofufo na webụsaịtị anyị na -egosi onyonyo na nnọchite anya obodo dị iche iche anyị na -ejere ozi.
Ndụmọdụ na omume Eprel 2021
Mee ka ọha na eze gosipụta mbọ anyị na-etinye na njirimara nwoke na nwanyị.
A na-agba ndị ọrụ ume ka ha tinye aha nnochi aha ha (dịka ọ / ya; ọ / ya; ha / ha) na ntinye aka email ha.
Gbaa mbọ hụ na njirisi na nkọwapụta mmadụ gụnyere, ziri ezi ma dịkwa mkpa maka ọrụ ọ bụla ma gbaa ndị mmadụ ume itinye, kama ewepụ ya.
A ga - edepụta iru eru naanị na nkọwa mmadụ ebe ha dị mkpa na ọrụ ahụ. A ga-eme ka o doo anya na otu ihe omumu bu ihe anabatara, ebe odi otua.
Melite atụmatụ BLG Mind, atumatu nhazi na usoro yana ntinye sitere n'ọtụtụ olu n'ime nzukọ ahụ.
Anyị enyochala ma melite Amụma Nzuzo anyị, Di iche iche na Nsonye, ​​na e bipụtara usoro ọhụrụ anyị.
Atụmatụ na omume nke Jenụwarị 2021
Gee ntị n'ọtụtụ olu iji nyere anyị aka ịhazi ọrụ anyị na ndị chọrọ ha.
Zụlite otu ndị nnọchi anya ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ iji sonyere Kọmitii Ogo na Ọrụ anyị ma nye aka na mkpebi nzukọ metụtara ọrụ.
Anyị na-ezube ị nweta nkwụnye maka ndị na-adịghị ahụ ụzọ iji mee ka websaịtị dịkwuo mfe.
Pịa na odo gburugburu na aka nri aka nri nke ihuenyo ahụ. Nke a ga-emepe menu nke ngwa ọrụ, na-eme ka saịtị ahụ dịkwuo mfe, gụnyere ịbawanye ederede, ịgụpụta ọdịnaya n'olu dara ụda ma gbanwee mkpụrụedemede / agba yana ọrụ nnweta ndị ọzọ maka ndị nwere nsogbu anụ ntị.
Mee ka ndi mmadu di iche iche karia ndi mmadu site na oru.
Kpọmkwem kwuo na mgbasa ozi ọrụ niile na anyị na-anabata ngwa sitere na ndị anaghị anọchi anya ya ugbu a
Ndị sitere nzụlite Black, Asia na Minority (BAME)
Ndị dị afọ 16-25
Ndi mmadu nwere echiche di iche iche banyere nwoke na nwanyi